SEO: 5 Isbeddello lagu Fiirinayo Google Raadinta Noolaha | Martech Zone
SEO: 5 Isbeddellada Lagu Kordhinayo Google Organic Search
Jimco, Oktoobar 13, 2017 Jimco, Oktoobar 13, 2017 Douglas Karr
Su'aal aan ku soo qaatay laba dhacdo oo aan kaga hadlay gobol ahaan waxay ahayd sida shirkadaha ay u qaybsanayaan miisaaniyaddooda suuq geynta saamaynta ugu badan. Ma jirto jawaab fudud oo tan ku saabsan. Waxay u baahan tahay in shirkaduhu ay si buuxda u fahmaan saameynta doolarka suuqgeynta ee hadda jira, iyagoo fahamsan sida kanaal kasta u saameynayo kan kale, welina waxay leeyihiin xoogaa lacag ah oo loogu talagalay tijaabinta iyo ikhtiraaca xeeladaha aysan qaadan.
Hal ujeedo miisaaniyad kasta oo suuqgeyn ah, in kastoo, ay tahay inay sii ahaato taraafikada matoorka raadinta. U fiirso in aanan sheegin ayna search engine. Ereyga waxaa badanaa lagu dhajiyaa kaabayaasha, horumarka dhamaadka-dhamaadka, iyo istaraatiijiyadaha isku-xirka dhismaha ee aan mar dambe saameyn ku yeelan sidii hore. Xaqiiqdii, haddii aad leedahay la-taliye SEO ah oo la shaqeynaya shirkaddaada diiradooduna waa meelahaas iyo ma ee ku saabsan dhaqanka booqdaha, istiraatiijiyadda nuxurka, dhexdhexaadiyeyaal badan, iyo wadiiqooyin kale… waxaad u baahan tahay inaad hesho cusub la taliyaha raadinta dabiiciga ah.
Marka ay timaado in ayna search engine (SEO), waxa kaliya ee joogtada ahi waa isbeddel. In kasta oo waayo-aragnimada heerka sare ee adeegsiga alaabta muhiimka ah ee Google ay u dareemayso macaamiil, macaamiisha suuq-geynta casriga ah waxay ogyihiin in aasaaska uusan waligiis joojinaynin wareejinta. Sababtoo ah isbeddelada ku dhaca habdhaqanka suuqa ama sababtoo ah isbeddelada algorithms ee awoodda leh, waxa ka dhigaya bog si fiican ugu habboon raadinta ayaa had iyo jeer ku socota isbeddel. Xayeysiinta MDG
Xaqiiqdii, horraantii sanadkan waxaa jiray 50% ilaa 90% hoos u dhac ku yimid taraafikada raadinta dabiiciga kadib markii Google ay hagaajisay boggaga ku cuslaaday xiriiriyeyaasha xiriirka iyo iftiinka nuxurka! Waxyaabaha ugu sarreeya ee la xidhiidha qiimeynta sare ee Google waa:
Tirada booqashooyinka degelka
Waqtiga goobta (ama waqtiga joogitaanka)
Bogagga halkii fadhi
Si kale haddii loo dhigo, Google waxay aqoonsaneysaa in bartaadu tahay ilo tayo leh oo ay booqdayaashu rabaan inay joogaan oo ay isticmaalaan, ama haddii ay tahay degel wax badan ka sheekeynaysa dadka leh waxyaabo hoose oo aan qiime u lahayn soo booqdaha. Google waxay dooneysaa inay ku sii ekaato xukunka warshadaha raadinta dabiiciga ah iyo inay sidaa sameyso, waa inay darajo galisaa boggaga internetka ee tayada sare leh, booqashada badan, iyo kuwa haynta badan. Websaydhkaagu waa inuu noqdaa ilaha ugu sarreeya ee macluumaadka bartilmaameedsanaya dhagaystayaashaada oo ka celinaya inay soo noqdaan. Ka fikir bartaada sida a maktabadda.
Isbedelada ay xayeysiinta MDG ku cadeyneyso kuna taageereyso xogtooda waxaa ka mid ah:
Site oo tayo leh ayaa hadda ka muhiimsan sidii hore.
Si qoto dheer, mashquuliya content waxay u egtahay inay darajo sarreyso.
casriga ah waxay noqdeen aaladda raadinta koowaad.
Raadintu aad bay u sii kordheysaa deegaan ahaan.
dhaqanka SEO waa aasaas, ma ahan faa'iido.
Qaadashada isbeddelladan tixgelinta, sidee ayaad ugu hagaajin kartaa suuqgeyntaada dijitaalka ah hagaajinta raadinta dabiiciga ah? Waxaan la shaqeyneynaa dhammaan waxyaabaha ku jira si loo yareeyo tirinta maqaallada la midka ah ee boggooda iyo qorista si qoto dheer, oo dhammaystiran maqaallada booqdayaasha tixraaca. Waxaan u adeegsaneynaa sawirada, maqalka, iyo fiidiyaha si aan uga caawino cadeynta macluumaadka qoraalka ah ee aan bixinayno. Waxaanan hubinaynaa inay dhammaan si dhakhso leh looga heli karo aaladaha moobaylka, sidoo kale.
Waa tan faahfaahinta buuxda, Raadinta Google ee 2017: 5 SEO Isbeddellada ah ee La daawado:
Tags: mdgxayeysiis mdgraadinta dabiiciga ahisbeddellada raadinta dabiiciga ahraadinta isbeddelladaisbeddelada seo
Qaabka aan u Akhrino Emailka Emailka ayaa badalaya